म्याकको लागि नेटफ्लिक्स अनुप्रयोग - डाउनलोड गर्न सम्भव छ? - मनोरञ्जन
नेटफ्लिक्स एक लोकप्रिय भिडियो स्ट्रीमि industry उद्योग हो जुन यसको गुणात्मक सामग्रीको लागि विश्वव्यापी मान्यता संकलन गरेको छ। कम्पनीले लगभग सबै उपकरणहरुमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न को लागी प्रबंधित गरेको छ। आज तपाइँ नेटफ्लिक्स स्मार्ट उपकरणहरू, गेमि con कन्सोलहरू, टिभी सेटहरू, र पीसीहरूमा अपरेबल पाउन सक्नुहुन्छ। जे होस्, त्यहाँ म्याक मा यसको उपलब्धता को बारे मा केहि गलत धारणा देखिन्छ।
निस्सन्देह नेटफ्लिक्सको लागि डाउनलोड गर्न आईओएस अनुप्रयोग उपलब्ध छ। तर यो ल्यापटप र पीसी को लागी macOS को लागी उपलब्ध छ? त्यो क्षेत्र हो जुन हामी आज अन्वेषण गर्न जाँदैछौं। नेटफ्लिक्सले म्याक प्लेटफार्महरूको लागि टेबुलमा के ल्याउँछ भन्ने बारे सिकौं।
के नेटफ्लिक्स अनुप्रयोग म्याकको लागि उपलब्ध छ?
म्याकको लागि नेटफ्लिक्सबाट कुनै आधिकारिक अनुप्रयोग छैन। यो थोरै अनौंठो छ, यो दिइएको छ कि यसको आईओएस अनुप्रयोग संस्करण छ। उपलब्ध नभएको पछाडि कारण भनेको MacOS को लागि मात्र अनुप्रयोग बनाउनु हो, कम्पनीले व्यापक लगानी गर्नुपर्नेछ। म्याक जस्तो प्रतिबन्धित प्लेटफर्ममा कुनै पनि लगानी महत्वपूर्ण नोक्सानमा परिणत हुन सक्छ। तसर्थ, कम्पनी यो विचार दिन अनिच्छुक छ।
वैकल्पिक रूपमा, उनीहरूले वेब ब्राउजरहरू मार्फत म्याकको लागि नेटफ्लिक्स प्रदान गरेका छन्। यो एक मानक नेटफ्लिक्स अनुप्रयोग जस्तै छ, र तपाईं सुविधाहरूको पूर्ण दायरा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं कसरी म्याकको लागि नेटफ्लिक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे विस्तृत वर्णन गरौं।
यो पनि पढ्नुहोस्: कसरी नेटफ्लिक्स विद्यार्थी छुट छ?
म्याकमा नेटफ्लिक्स कसरी प्रयोग गर्ने?
तपाईं म्याकमा कुनै पनि वेब ब्राउजर प्रयोग गरेर नेटफ्लिक्स अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुने ब्राउजरहरूको सूची यहाँ छ:
सफारी वेब ब्राउज़र
प्रयोगको लागि चरण-द्वारा मार्गनिर्देशन:
माथि उल्लेखित कुनै पनि वेब ब्राउजरहरूमा Netflix.com हेर्नुहोस्
ईमेल र पासवर्ड प्रयोग गरेर साईन ईन गर्नुहोस्
तपाईं प्रोफाइल चयन गर्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईंसँग नेटफ्लिक्समा पहुँच छ
याद गर्नुहोस्, नेटफ्लिक्स प्रयोग गर्नको लागि तपाईंसँग मान्य सदस्यता हुनु आवश्यक छ।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस एकदम सीधा छ। होमपेजमा, लगइन गरेपछि तपाईसँग चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू छन्। जहाँसम्म, तपाई विधाहरू अनुसार कोटीहरू ब्राउज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं चलचित्र वा टिभी कार्यक्रम फेला पार्न खोज विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाईं नाम पुन: याद गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाई परिणाम प्राप्त गर्न अभिनेता वा निर्देशकको नाम टाइप गर्न सक्नुहुनेछ।
नेटफ्लिक्स अनुप्रयोगसँग समान, तपाइँ तपाइँको कर्सरलाई चित्रको विशेष तस्बिरको ब्यानर वा ब्यानरमा होभर गर्न सक्नुहुन्छ वा सारांश पहुँच गर्न शो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन नेटफ्लिक्स प्रदान गर्न परिचित छ।
कसरी नेटफ्लिक्स फिल्म खेल्ने वा म्याकमा देखाउने?
लग ईन गरेर र चलचित्र वा टिभी कार्यक्रम शीर्षक फेला पछाडि, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको यसमा क्लिक गर्नुपर्दछ। नेटफ्लिक्सले यसको पूर्वनिर्धारित प्लेयर लोड गर्दछ, र चलचित्र स्ट्रिम गर्न सुरू हुन्छ। तपाईं आफ्नो सदस्यता अनुसारको गुणवत्ता छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको प्राथमिकता अनुसार अन्य परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक मानक अनुप्रयोग जस्तै छ। त्यहाँ एक टाइमलाइन, पज, छिटो फर्वार्ड, र वेब ब्राउजरमा म्याकको लागि नेटफ्लिक्समा अन्य समान इन्टरफेसहरू उपलब्ध छन्।
तपाइँले छनौट गर्न एक छुट्टै निर्मित उपशीर्षक र अडियो विकल्प उपलब्ध छ। त्यसकारण, तपाईले फिल्मको अडियो र उपशीर्षकहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ वा नेटफ्लिक्समा उपलब्ध शो।
त्यहाँ म्याकको लागि नेटफ्लिक्समा कुनै प्रतिबन्ध छ?
तपाइँसँग स्वसंपूर्ण अनुप्रयोग छैन भन्ने तथ्य बाहेक, म्याकका लागि त्यहाँ धेरै प्रतिबन्धहरू छैनन्। यो विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक क्षेत्रमा उपलब्ध छ जहाँ नेटफ्लिक्स प्रचलित छ। जहाँसम्म, त्यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रतिबन्ध छ, तपाईं प्रयोग ब्राउजर अनुसार।
गुगल, मोजिला, र ओपेरा को लागी, तपाईं भिडियो गुण 720p सम्म पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। सफारीले 1080P समर्थन गर्न सक्दछ यदि तपाईंसँग ११.० भन्दा पुरानो म्याक संस्करण छ भने। MacOS ११ र माथिको लागि, तपाईं KK गुण पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंले क्वालिटीको सदस्यता लिनुभयो।
यदि तपाईंसँग गुणस्तरको सदस्यता छैन भने, तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुन्न।
के अल्ट्रा HD र HDR म्याकको लागि नेटफ्लिक्समा उपलब्ध छ?
हो। अल्ट्रा HD र HDR म्याकको लागि नेटफ्लिक्सका लागि उपलब्ध छन्। यद्यपि तपाईलाई भर्खरको म्याकोस ११.० चाहिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको म्याक स्ट्रिमिंगका लागि उच्च-गुणवत्ता प्रदर्शनसँग उपयुक्त छ। अन्यथा, तपाइँ या त तपाइँको प्रणाली ओभरलोड हुन सक्छ, वा यो काम गर्दैन।
HDR वा UHD पहुँच गर्न तपाईलाई सफारी वेब ब्राउजरको नयाँ संस्करण चाहिन्छ। अवश्य पनि, HD सामग्रीको सदस्यता गुणस्तर पहुँच गर्न अपरिहार्य छ। एकचोटि तपाईंले यी आवश्यकताहरू पूरा गर्नुभयो भने, तपाईं अल्ट्रा HD वा HDR कुनै कमजोरी बिना स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाईं म्याकमा नेटफ्लिक्सबाट सामग्री डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
MacOS अनलाइन स्ट्रिम गर्न प्रतिबन्धित छ। तपाईको म्याकमा सामग्री डाउनलोड गर्नका लागि कुनै उपाय छैन। सरल शब्दहरूमा, नेटफ्लिक्सको अफलाइन सामग्री म्याकको लागि उपलब्ध छैन, र तपाईंलाई सक्रिय उच्च-स्पीड जडान आवश्यक छ। जे होस्, त्यहाँ एक हटफिक्स छ जसले तपाईंलाई म्याकमा अफलाइन सामग्री हेर्न सक्षम गर्दछ।
तपाईंको आईओओ लिनुहोस्:
यदि तपाईंसँग आईओएस उपकरण छ जस्तै आईफोन वा आईप्याड, तपाईं नेटफ्लिक्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछि, तपाइँ तपाइँको मनपर्ने सामग्री डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ पछि यसलाई अफलाइन प्रयोगको लागि स्ट्रिम गर्न। अब, यसले तपाईंलाई म्याकको साथ कसरी मद्दत गर्दछ?
तपाईंलाई केवल आवाश्यक हुन्छ AirPlay वा तपाईंको समान उपकरणहरूको लागि अन्य समान स्क्रीन-साझेदारी प्लेटफर्महरू। तपाईं आफ्नो आईओएस उपकरण मकोससँग समक्रमण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। एक पटक तपाइँले त्यो समाप्त गर्नुभयो, स्क्रिन तपाइँको MacOS मा देखिने छ, र तपाइँ अफलाइन सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रक्रियाको एक मात्र दोष यो हो कि तपाईलाई स्थानीय वाइफाइ नेटवर्क चाहिन्छ।
के त्यहाँ म्याकको लागि नेटफ्लिक्स अनुप्रयोगको कुनै विकल्प छ?
त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धी छन् प्रीमियम गुणस्तर सामग्री प्रदान गर्न दौडमा भाग लिइरहेका छन्। Hulu र YouTube स्ट्रिमिंग सामग्री प्रदान गर्न नेटफ्लिक्सको उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धी हो। यदि तपाईं प्रमाणिक अनुप्रयोग खोज्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं यी दुई प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एप्पलले आफ्नो एप्पल टिभी + अनुप्रयोग पनि ल्याएको छ, जुन अहिलेको सामग्रीमा ढिलो छ, तर हामी भविष्यमा यसलाई उदाउन सक्ने देख्न सक्छौं। यो म्याक को लागी डाउनलोड गर्न को लागी उपलब्ध छ।
जबकि त्यहाँ म्याकको लागि कुनै नेटफ्लिक्स अनुप्रयोग छैन, यदि तपाईं मिल्दो वेब ब्राउजरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो निर्बाध छ र अफलाइन डाउनलोडको अभाव जस्तो केही नगण्य प्रतिबन्ध बाहेक कुनै समस्या उत्पन्न गर्दैन।
MacOS को लागी नेटफ्लिक्स दाबी गर्ने कुनै पनि अनुप्रयोगको लागि नपार्नुहोस्। यदि यो नेटफ्लिक्स, वा एप्पलको म्याक स्टोरको आधिकारिक साइटमा उपलब्ध छैन भने यो म्याकको लागि उपलब्ध छैन। आफूलाई अरू नक्कली प्लेटफर्महरू मार्फत कुनै पनि सम्भावित घोटालाहरूबाट सुरक्षित राख्नुहोस्।
नेटफ्लिक्स नि: शुल्क परीक्षण कसरी पाउने?
म्याक क्यामेरा त्रुटि कार्य गरिरहेको छैन - सम्भव फिक्सहरू
एन्ड्रोइड टिभी बक्स बनाम आगो स्टिक
सेफ मोड टम्बलरमा छ
रोबलोक्स जहाँ कोडहरू राख्ने
तपाईं टिभी कार्यक्रम अनलाइन हेर्नुहोस्
स्मार्ट टिभीमा प्लूटो टिभी
tencent गेमिbबडि पब मोबाइल